Dhangii HTML tiin Galmeewwan Barruu Olkaa'uu
Galmee kitaabessaa LibreOffice dhangii HTML keessatti kuusuu dandeessa, kanaafuu iyya'aa saphaphuu keessatti arguu dandeessa. Yoo barbaadde, fuula xumuraa akkaataa keeyyata gubbaa fuula HTML adda ta'e maddisiisuuf yeroo hundaa akkaataa mul'ataa galmee keessaa waliin walitti firoomsa. Barreessaan LibreOffice battalumatti fuula geessituu tokoon tokkoo fuulaa of keessaa qabu uuma.
Durtii LibreOffice haalataa keeyyata gubbaa tokko fayyadamuuf, fakkeenyaaf, "Heading 1", keeyyata iddoo fuula HTML haaraan itti maddu barbaaddutti.
Sanduuqa Haalataa keessatti, haalataa keeyyataa kan fuula HTML haaraa maddisiisuuf fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Daandi fi maqaa galmee HTML tiif galchuu, fi achumaan Kuusuu filadhu.
Title is: Dhangii HTML tiin Galmeewwan Barruu Olkaa'uu